Ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na -ebubata ya DeepFast
Ngalaba ike bụ akụkụ kachasị mkpa nke moto downhole. Anyị na -akọwa ngalaba ike site na dayameta tube ya. nhazi robe/stator lobe nhazi na ọnụọgụ nke ọkwa. SGDF nwere ike inye moto site na 2 7/8 ruo 11 1/4. Dị ka ọ na -adị, moto nwere ike wepụta torque na ike karịa ka nha tube na -abawanye. Emebere rotor na stator dị ka ihe dị n'akwụkwọ nsọ nwere nnukwu na obere dayameta. Lobe bụ ọdịdị okirikiri gbagọrọ agbagọ site na ọdịiche dị na nnukwu na obere dayameta.
Stator nwere otu lobe karịa rotor. Ọdịiche dị na lobes na -emepụta mpaghara mmiri mmiri (oghere) ebe enwere ike ịgbanye mmiri iji mepụta ntụgharị. Nkeji a bụ nke a na -akpọkarị ụzọ nke stator. Enwere ike gbanwee ogo na ọsọ ọsọ site na mgbanwe lobes na nkebi. N'ikwu okwu n'ozuzu, moto nwere ọtụtụ lobes nwere ike mụbakwu torque, moto nwere obere lobes nwere ike nwee oke ọsọ. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịbawanye torque site n'ịgbakwụnye ọkwa ndị ọzọ. Yabụ, enwere ụzọ abụọ iji bulie torque: nke mbụ, mụbaa rotor/stator lobes; nke abụọ, mụbaa nkebi moto.
Akwa okpomọkụ eguzogide
Mgbochi mmanụ na mmiri
Anyị na -eme mmepe elastomer na nrụpụta na nkwado nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na sayensị na Europe maka ngwọta dị elu.
Ngwunye anyị nke ndị na -emepụta nchara nwere ezigbo aha mba na mba na -enye anyị ohere ibute igwe na -adịgide adịgide n'ahịa. Nhọrọ anyị ji nlezianya họrọ akara ule ihe pụrụ iche maka moto anyị na -enye arụmọrụ achọrọ.
Izu oke zuru oke na ogologo ndụ nke ndị elastomers anyị na -eme ihe dị iche na arụmọrụ. Anyị na -etinye ihe omimi miri emi gbasara physics ozugbo na ngwaahịa maka nsonaazụ ndị ahịa anyị na -adabere kwa ụbọchị.
AKWỤKWỌ NKE AKWỤKWỌ IKE
Ọbụlagodi 30 ruo 50% karịa torque karịa motors downhole.
Dịkarịa ala, 50 ruo 100% arụ ọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere nke ndị na-agbagharị ụgbọ ala nkịtị n'ihi igwe igwe axis ise maka rotors na stators.
Kwesịrị ekwesị maka oke okpomọkụ
Ọ dabara na OBM
Nke gara aga: Ngwaọrụ igwu mmiri abụọ na ogbo abụọ
Osote: Downhole Motor
Akụkụ Ike 120mm
Ngalaba Ike 135mm
Ngalaba Ike 165mm
95mm Nkebi Ike